Duqa Muqdisho oo sheegay inuu ka shaqeyn la’yahay Xildhibaano iyo Siyaasiyiin | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Duqa Muqdisho oo sheegay inuu ka shaqeyn la’yahay Xildhibaano iyo Siyaasiyiin
Duqa Muqdisho oo sheegay inuu ka shaqeyn la’yahay Xildhibaano iyo Siyaasiyiin
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa sheegay in muddo Saddex bilood ah uu raadinayay sidii xal loogu heli lahaa Xildhibaano iyo Siyaasiyiin uu sheegay inuu ka shaqeyn la’yahay.
Wuxuu sheegay rag ay iskala shaqeyn jireen Golaha Wasiirada ee Dowladda Federaalka iyo siyaasiyiin inuu ka harsan la’yahay, kuwaasi oo tilmaamay ilaa hadda oo uu joogo Dowladda Hoose in ay daba taagan yihiin, kana doonayaan inuu u shaqaaleysiiyo rag gaar ah oo ay wataan.
Sidoo kale wuxuu sheegay arrintan in ay caqabad ku noqotay shaqadii ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed, wixii hada ka dambeeyana ay sameynayaan waqtiyo kala duwan oo ay ugu adeegaan shacabka iyo siyaasiyiinta oo uu tilmaamay in mar walba ay ugu yimaadaan xafiiskiisa.
“Waa arrin nagu qaadatay muddo Saddex bilood ah sidee xal loo heli karaa, ragga waa saaxiibadey Dowladda ayaan ka wada nimid, mudo ayaan ka wada shaqeyneynay, marka waxaan ku iraahdaa Dowladda waan idinkaga soo tagee, Dowladda Hoose ayaan imidee maxaad ii daba socotaan, waa dhib mushkilad jirta, siyaasadii ayaa waxay isku bedeshay danleey, waxayna noo diiday inaan u adeegno shacabkii caadiga ahaa, taas waxay qasabtay inaan waqti u kala sameyno shacabka iyo siyaasiyiinta.” Ayuu yiri Gudoomiye Yariisow.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay shaqooyinka Dowladda in ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, wuxuuna xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka dalbaday in ay fursad u siiyaan sidii uu ugu adeegi lahaa bulshada.